महालक्ष्मी बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता – www.agnijwala.com
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी बिकास बैंकबीच आइतबार बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन.पि. प्रधान र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरे ।
सो कार्यक्रममा इन्स्योरेन्सका नायबप्रमुखकार्यकारी अधिकृत बि.के. श्रेष्ठ, मार्केटिङ्ग मेनेजर तीर्थराज पुरी तथा बैंकका तर्फबाट बरिष्ठ नायबप्रमुखकार्यकारी अधिकृत सागर शर्मा र बरिष्ठ मार्केटिङ्ग मेनेजर प्रकाश घिमिरेको समेत उपस्थिति थियो ।
सो सम्झौतानुसार महालक्ष्मी बैंकका सम्पत्ति तथा सो बैंकका ग्राहकहरुको बीमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले गर्नेछ